Faka Isithonjana Sokuthunyelwa Kwezithombe Ezifakiwe ku-WordPress Yakho Ye-RSS feed | Martech Zone
NgoMgqibelo, July 5, 2014 NgoMgqibelo, July 5, 2014 Douglas Karr
Besilokhu sithuthukisa abaxhasi bethu nokuqukethwe muva nje nge Taboola, ipulatifomu yokwenyusa okuqukethwe lapho okuphakelayo kwethu kufundwa khona nama-athikili aqondaniswe kokunye ukushicilelwa okuhlobene kuyo yonke iwebhu. Sijabule ngokulawulwa okuphelele kokwabiwa kanye nezindleko ngokuhola ngakunye ngohlelo - futhi abasebenzi babo bebelungile.
Sithuthele ku Taboola ngemuva kokusebenzisa enye insizakalo enganaki isabelomali sethu ngephutha bese ifuna ukuthi sikhokhele ukusatshalaliswa okungabiza u- $ 10,000 abasinikeze kona. Mhlawumbe okube yisidina kakhulu ukuthi enye yezindatshana ababefuna ukuthi sizikhokhele ukwenyuselwa kuzo kwakuyindatshana yazo! Umm… cha.
Enye inzuzo kaTaboola ukuthi singasebenzisa zombili uhlu lwama-static athikili esifuna ukuwakhangisa futhi sisebenzise okuphakelayo kwethu ukuqhubeka nokwazisa izindatshana zethu ezintsha. Kupholile impela. Lokhu kusho ukuthi singakhuphula izindatshana ezimayelana nabaxhasi bethu, izindatshana zethu ezidume kakhulu, futhi sithole ithrafikhi kuma-athikili akamuva.
Kuyathakazelisa ukuthi noma ngabe unika amandla izithombe ezifakiwe ku-WordPress, lokho akuguquli ukuphakelwa kwe-RSS kwebhulogi lakho le-WordPress ukufaka lezo zithonjana ku-RSS feed yakho. Ngicabanga ukuthi lelo yigebe ekusebenzeni i-WordPress edinga ukukulungisa, kepha okwamanje kunesisombululo!
ILadislav Soukup isungule i-plugin ebizwa ngokuthi I-SB RSS Feed Plus lokho kukwenza ukwazi ukushumeka isithonjana sakho seposi usebenzisa kahle i-RSS Feed efanele abezindaba: okuqukethwe nokumakwa okuvalekile. Faka futhi ulungiselele i-plugin futhi ungacacisa isithombe kanye namanye amapharamitha angeziwe.
Tags: ivalwefakela isithonjanaILadislav Soukupokuqukethwe kwabezindabathumela isithonjana kokuphakelayorss feedrss feed isithombe esifakiwerss isithonjanarss isithonjanasb rss feed plus
Ngabe Ukumaketha Kuguquka Ngempela Kangakanani?
Ngo-Apr 16, i-2016 ku-10: 11 AM
Kwakuyikhanda ngempela ukubona imikhankaso ye-RSS-to-imeyili ngaphandle kwezithombe ngoba okuphakelayo kwe-RSS kwakungekho umaki odingekayo wokudonsa izithombe. Noma kunjalo, ushintshe ifayela le-works.php futhi manje i-MailChimp ingadonsa izinto ezidingekayo futhi manje ama-imeyili abukeka emahle.
Kodwa-ke, izithombe ezise-RSS feed zibukeka zikhulu impela futhi zifisa ukuzikhulisela kusayizi ofanele. Izidingo zokusesha okuningi futhi uthole isisombululo salokhu.